Gargaarka Wadajirka ah - Gargaarka Gargaarka ee Musiibada
Bogga ugu weyn/Gargaarka Labada Dhinac
Gargaarka Labada Dhinac2022-06-10T19:04:11-04:00
Si loo helo wadnaha himilooyinka bulshada iyo caqabadaha, si loo dhiso xiriiro qoto dheer shabakada sii kordheysa, iyo in lala wadaago fikradaha iyo casharrada laga bartay waxyaabihii hore ee mashaariicda gargaarka bani'aadamnimada, waxaan ku howlan nahay safar 30 tababar magaalada Guga 2018, ka dibna la soco nooca xeebta Galbeed ee Dayrta. Tilmaamahan wuxuu jajabinayaa socodka qaybta is-dhexgalka ee aqoon isweydaarsiga. Waxaan rajeyneynaa in qaab-dhismeedkan fududeeyeyaashu ay kicin karaan wadahadallo badan oo maxalli ah oo ku saabsan barnaamijyada badbaadada wadaagga ah.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan tan si xor ah u helno. Fadlan jawaab ku soo dir foomkeena xiriirka, fadlan nala wadaag! Aynu u leexanno hirarka ka dhanka ah hanti-wadaagga musiibada.
Kooxda Wada Shaqaynta Tababbarka ee Musiibada Musiibada
Soo dejiso hage
Waa maxay Gargaarka Mutual? iyo Sidee Loo Bilaabaa Shabakad?
Waxaan nahay Dhamaanteen Waan Helnay, Waxaan nahay Dhamaanteen Waxaan Ubaahanahay: Sharax Mucaawino Is-kaashanaysa
Dadku aad ayey u jahwareersan yihiin oo ay u baqayaan hadda, waxayna la halgamayaan inay ogaadaan waxa la sameynayo. Waa kan video cusub oo ay abuureen Dean Spade iyo Ciro Carillo oo ku saabsan sida m ...
Adduunyada ay ka taliso tartanka hanti-wadaaga aan joogsiga lahayn, ee ay dadku ku dagaallamaan inay iska horyimaadaan, fowdada waxay bixiyaan aragti ka duwan: Gargaarka Mutual.
Maxaan uga jeednaa Gargaarka Wadajirka ah?
Gargaarka is-kaashu waa eray lagu sharxo dadka is siinaya midba midka kale taakuleyn maadi ah, isagoo isku dayaya inuu iska caabiyo dhaqdhaqaaqa firfircoonaanta, kala sarreynta iyo xaqiijinta nidaamka, abaabulidda caburinta samafalka iyo adeegyada bulshada
shimbiro joosie ah
Gargaarka Wadajirka ah: Hordhac
Waxaan u sameeyay sheygan bilowga ah, oo ay ku jiraan dadka laga yaabo inaanan si buuxda uga shaqeyn-ballanqaadyo siyaasadeed ama aragti. Ujeeddadu maahan in dadka la siiyo waxbarasho buuxda, ama in hoos loo sii dhejiyo waxa kaalmada labada dhinac '. Taabadalkeed, waxaan rabay inaan soo bandhigo aalado yar yar oo dadka ka caawin kara inay ku bilaabaan ku dhaqanka is caawinta. Wax qabashadu waa waxbarashada siyaasadeed ee ugu fiican! Saaxiibbada iyo abaabulayaasha muddada-dheer shaki kuma jiro inay helaan wax badan oo ay ku dhaleeceeyaan koontadan daruuriga ah ee xadidan & qayb ahaan. Anigu ma haysan doono si kale! Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa dhammaan akhristayaasha. Jacayl iyo midnimo,
Waa maxay Gargaarka Mutual? Horudhac ah Isbahaysiga Caddaaladda Cimilada - Isbahaysiga Caddaaladda Cimilada
Hordhac ku saabsan waxa iskaashi labada dhinac ah iyo sida ay uga duwan tahay noocyada kale ee gargaarka, iyo sidoo kale hage loogu talagalay sida loogu biiro shabakadda gargaarka iskaashiga
Taariikhda iyo Mabaadi'da Gargaarka Is-kaashan
In dhaweyd ma maqlaysay wax badan oo ku saabsan is-caawinta? Ma isweydiineysaa halka uu ka yimid iyo maxay yihiin mabaadiida ka dambeysa? Kaalay ka maqal dadka waawayn ee safka hore ee iskaashiga maadaama ay naga taageerayaan sidii aan wax u baran lahayn!
Aynu Wada Hadalno Gargaarka Wadajirka ah
Marka, waqtigii la-wadaagay-19, waxaan aragnay wicitaanno badan oo loo dirayo iyo "Gargaar Is-kaashan ah". Waa kuwee dope, weyn, cabsi badan, muhiim ah, laakiin sidoo kale wuxuu keenay jahwareer qaar (ku dhiira waxaan idhaahdaa ikhtiyaar ikhtiyaar) sida labada dhinac u yihiin iyo wixii aan ahayn.
Jadwalka Aqoonsiga Barnaamijyada wax dhisaya
Jaantuska soo socda ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo aqoonsiga baahiyaha aasaasiga ah ee ka maqnaan kara bulshada ama dhaqdhaqaaqa, iyo haddii suurtagalnimada abuurista "barnaamij wax dhisaya" (urur loogu talagalay in lagu qanciyo baahida) ay noqon lahayd mid mudan
Safka hore ee Praxis iyo Gargaarka Gargaarka ee Musiibada
Waxaad Leedahay Xirfado: Qiimaynta Waxa Xirfadaha Aad Ugu Soo Bixi Kartid abaabulka xagjirka ah
Runtii way fududahay markaad fiirineyso sawirka weyn ee abaabulka, inaad garan weydo meesha laga bilaabayo iyo sida loo caawiyo. Waxay yeelan kartaa tabar-dari iyo curyaannimo.
Gargaarka Isku Haya: Sida Loo Sameeyo Shabakad Ee Deriskaaga ah
Waad ku mahadsan tahay furitaanka inaad ka abuurto shabakad caawimaad wadaag ah gobolkaaga. Wax badan ayaan isu baahanahay xilligan. Halkan waxaa ku yaal sheybaar loogu talagalay waxa aan ku suganahay Medford iyo Somerville, Massachusetts, USA. Dabcan, samee waxa ku habboon xaafaddaada oo tan ku qaado badar milix ah! Waxaan dhiseynay diyaaradan markii aan duulnay wax badana aan ku baranayno wadada.
Sida loo bilaabo mashruuc gargaar is-kaashatada dadka asaliga ah:
Waxaan go'aansanay inaan abuurno hagahan maadaama aan ogaanay in inta badan ilaha hada loo heli karo abaabulka COVID-19 ee Gargaarka Wadajirka ah aysan ku filneyn marka lala barbardhigo doodaha lala yeelanayo mashaariicda kale ee Is-kaashatada iyo khibradaha aan la leenahay ee aan la shaqeyneyno laba koox oo ka soo jeeda dadka asaliga ah.
Caawinaada Wadajirka ah: Sida Loo Abuuro Geed Telefoon / Qaylo
Dadku way walwalsan yihiin waxayna sidoo kale iskudayayaan inay halkaa u joogaan midba midka kale siyaabo yar iyo weynba. Ujeedada laga leeyahay ilahaani waa in laga caawiyo dadka waawayn inay isku soo ururiyaan geed taleefan maxalli ah: dhismaha ugu horreeya ee dhisme ka caawiya hubinta in dadku ku xirnaadaan wax kasta oo ay yihiin, iyo inay helaan taageerada ay u baahan yihiin waqtiga ugu habboon.
Aagga Bay Wadajirka Caddaaladda Wadajirka ah
Xaashiyaha Boorsooyinka iyo Xaanshida Qoddobka
Intii lagu jiray gu'gii 2014 'Aagga Bay Isbadalidda Caddaaladda Wadajirka ah (BATJC) waxay bilaabeen adeegsiga ereyga "boodh" si ay ula jeedaan nooc gaar ah oo xiriir ah oo ka dhex jira shaqada caddaaladda isbadal doonka ah (TJ). Waxaan ubaahanahay erey sifeyno nooca xiriirka kadhexeeya dadka midba midka kale u jeesan doono taakuleynta rabshadaha, khibradaha waxyeelada leh iyo xadgudubyada, ha ahaado badbaadayaal, goobjoogayaal ama dadka waxyeello soo gaartay.
Sidee Loogu Dhajiyaa Xaafadda
Markay arrimuhu adkaadaan, waxaan tusnaa deriskeenna. Markaad tahay qof dhibic xaafadeed ah, waxaad qaadi lahayd mas'uuliyadda inaad la xiriirto deriskaaga, hubinta wixii baahiyo ah ee ka soo kordha dhismahaaga, isku-dubaridka wada hadalka kooxda xaafadda ama geedka taleefanka, iyo inaad la xiriirto barta dadka kale xaafadaha si loogu ururiyo kheyraadka.
Kacdoon Sidney Black
Khariiddada Pod Pod ee Gargaarka Mutual
Gargaarka is-kaashatada wuxuu eegi karaa siyaabo badan oo kala duwan. Kuweena jira ee naafada ah iyo kuwa naafada ah, madow, asaliga ah, jinsiyadaha kala duwan, iyo dadka midabka, masaakiinta, fasalka shaqeeya, soogalootiga, queer, trans, laba ruux, iyo in ka badan, waxay u badan tahay inay horeyba u tababaranayeen caawinaad wada jir ah oo xitaa ma ogaan karaan.
Gargaarka Wadajirka ah Sida Loo Sameeyo
Hadda oo aad ogtahay waxa caawimaad wadaagga ahi tahay, aan ka hadalno sida loo sameeyo.
Sida loo sameeyo khariidad caawimaad wadaag ah
Waa maxay Khariidadda Gargaarka Mutual? Oo sidee u samaysaa mid?
Muunad: Casuumad Bulsho / Qoys oo loogu tala galay Samaynta Kooxda Caawinta Labada Dhinac
Waad salaaman tihiin kuwa la jecel yahay! Ku soo dhowow casuumaad-sannadeedka ugu horreeya (oo aan rajeyn doono inuu dhammaado!) Si aad ugu soo biirto [INSERT NEighBORHOOD / COMMUNITY / CITY] COVID-19 Mutual Aid Group. (C-MAG?) Markuu fayrasku faafo, sida bulshooyin aad u tiro badan, waxaa naloo weydiisanayaa inaan ka qaybgalno kala fogaynta bulshada iyo xitaa is-karantiil si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada.
Foomka qaabaynta isku-dubaridka gargaarka is-kaashiga ah
Waqtiyada laga yaabo inay cabsi leeyihiin waxay nooga baahan yihiin inaan si wanaagsan isu taageerno. Si la mid ah sida aan ugu soo qaadanno qasriga qoysaska murugaysan iyo dharka carruurta si loogu dabaaldego dhallaanka, waxaan isugu imaan karnaa bulsho ahaan inaan iska caawinno xilligan adag. Qeyb muhiim u ah joojinta faafitaanka coronavirus-ka ee hareeyay nidaamkayaga isbitaal waa iskaa-wax u qabso iskaa wax u qabso ah
Casuumad deris ah oo laxiriira Coronavirus
Waad ku mahadsantahay xiisahaaga! Waxaan aad u taabtay dadka tirada badan ee u qaybinaya qayb ka mid ah dukumiintigan bulshadooda. XUSUUS MUHIIM AH: Uma baahnid inaad marin u yeelato tifaftirka. Si fudud u soo dejiso dukumiintiga, ugu keydi kombuyuutarkaaga, oo u beddel si aad ugu haboonaato baahiyahaaga!
AOC iyo Mariame Kaba
Gargaarka Isku-Xidhka Qalabka Qalabka 101: #WeGotOurBlock
Qalabkani wuxuu ka kooban yahay tilmaamo tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay sida aad u dhisi karto taada
xiriir iskaashi wada jir ah inta aad ka nabad gasho faafitaanka COVID-19.
Sida loo Bilaabo Kooxda Caawinta Wadajirka ah
Waqtigan xaadirka ah, dadka ku nool waddanka oo dhami waxay isu imaanayaan si ay u daryeelaan midba midka kale bulshada dhexdeeda. Kooxaha gargaarka is-kaashatada waa kooxo aan rasmi ahayn oo mutadawiciin ah oo ka caawiya deriska isku-xirnaanta inta lagu jiro xilliyada dhibaatada waxayna xaqiijinayaan in qofna bulshada dhexdeeda uusan kaligiis wajihi karin, gaar ahaan kuwa aadka ugu baahan.
Gargaarka Gargaarka ee Musiibada Richmond
Qalabka-Jawaabta Degdegga ah ee 'Covid-19'
Kusoo dhawow Qalabka Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Richmond!
Waxaan u abuurnay dukumiintigan inuu noqdo mid kheyraad u ah labadeena cusub
mutadawiciin iyo kuwa kale ee daneynaya inay iyagu bilaabaan
Erayadii ugu horreeyay ee nuqulkii ugu horreeyay ee hagahan waxaa la qoray Maajo 14, 2020, markii COVID-19 uu ahaa sheekada horseedka u ah war kasta oo la baahiyo iyo cinwaanka wargeys kasta bilo, iyo kooxaha gargaarka is-kaashanaya waxay la shaqeynayeen deriskeenna iyo helitaanka sii kordheysa oo ku xeel dheer dhismaha muddada dheer, mashaariicda adkeysiga leh si loo caawiyo bulshadeena loona abaabulo isbedelka bulshada ee heer xaafadeed.
Gargaarka Wadajirka ah: Dhismaha Berri
Baadhitaan dheeri ah oo ku saabsan iscaawinta labada dhinac iyo sida loo dhiso kaabayaasheena gargaarka iyo dhaqdhaqaaqa.
Gargaarka Wadajirka ah: Ku noolaanshaha Aragtidayada
Nagala soo qaybgal wadahadalka abaabulayaasha aasaasiga ah ee qiyaasaya oo dhisaya adduun halkaasoo baahiyaheena la daboolay, waxaan ku noolaan karnaa sharaf, waana is daryeelnaa
Shaxda Dhaqanka Ururka
Sannadihii ugu dambeeyay, waxaan inbadan oo waqtigayga ah kubixinayay caawinta ururada qabanaya shaqooyinka aan daryeelo (inta badan waxay ka shaqeeyaan joojinta xuduudaha, booliska iyo xabsiyada) si ay u dhisaan kaabayaashooda urureed si ay ushaqeeyaan ugana hortagaan isku dhacyada ina kala geyn kara.
Tilmaamaha Hoggaaminta ee Taageera Is-dhexgalka iyo Wada-shaqeynta
Waxaan ku lug la leeyahay ururada had iyo jeer ku dadaalaya inay taageeraan dadka sii kordhaya xirfado badan si ay adduunka uga dhigaan mid la jaan qaadaya qiyamka caddaaladda iyo isweydaarsiga. Waxaan soo saaraynaa qaabab aan go'aanno ku wada qaadan karno oo aan ku wadaagi karno kheyraadka si wadajir ah iyo wax kasta oo kale oo ay u baahan tahay in lagu dhiso xaaladaha bulsho ee aan dooneyno.
Zine-kan ayaa ah isku-dubbarid qaar ka mid ah casharadii ugu waaweynaa ee Gargaarka Musiibada Gargaarka Mutual uu ka bartay shabakadda abaabulayaasha iyo dhaqdhaqaaqayaasha ku howlan ka jawaabidda musiibada.
Akhrinta Su'aalaha Fasalka Gargaarka Wadajirka ah
Qof kasta oo xiiseynaya la socoshada fasalka aan wax ku barayo rubuckan, Queer iyo Trans Mutual Aid ee Badbaadinta iyo Abaabulka, ama adeegsiga dhammaan ama qayb ka mid ah manhajka koox koox akhris, waxaan u maleynayay inaan la wadaagi doono qaar ka mid ah su'aalaha doodda Waxaan ku isticmaalayaa fasalka.
Tilmaamaha Barashada Gargaarka Lacagta
Tilmaamaha daraasadda ee buugga Dean Spade ee 'Mutual Aid: Building Solidarity during This Crisis (and Next).'